एक किलो प्याजको २५० रूपैयाँ ! | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
एक किलो प्याजको २५० रूपैयाँ !
२०७६ मंसिर १२, बिहीबार ११:५१ गते
चितवन पोष्टका आदरणीय पाठकवृन्द, एकबारको जुनीमा अन्तिम श्वास नफेरून्जेल अनेक–अनेक सुन्न र देख्न पाइन्छ भन्थे बूढापाकाहरु, हो रहेछ । यसपालि सुनियो र भोगियो कि सार्क मुलुकहरुमध्ये पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल र मालदिप्सले तरकारीमा मिसाएर वा अन्य तरिकाले प्याज खाने गर्छन् । प्राप्त खबरअनुसार चीनले पनि प्याज राम्रै उपभोग गर्छ । तर, उत्पादनको हकमा थाहा भएअनुसार भारतले ज्यादा प्याज उत्पादन गर्छ र त्यो भारतीय प्याज भारतभरि र छिमेकी मुलुकमा खपत हुन्छ । साना मुलुकहरु भारतका ग्राहक हुन् । मामला प्याजको मात्रै होइन, खासगरी भारतमा उत्पादित चीजबीच खरिद गर्ने ग्राहकहरु भूटान, नेपाल, बंगलादेश हो । पाकिस्तान र भारतको बीच सीमा विवादलगायत काश्मीर मुद्दामा लडाइँ नै परेपछि दुई देशबीच हार्दिकता छैन । यही कारण हुन सक्छ, पाकिस्तानको उत्पादन भारतले किन्दैन र भारतको पाकिस्तानले किन्दैन । चीनको कुरा बेग्लै भो । चीनले आफ्ना जनतालाई चाहिने चीजबीज सकेसम्म आफैँ उत्पादन गर्छ र ज्यादा हुँदाका बखतमात्रै अन्य मुलुकलाई बेच्ने गर्छ । कुरा प्याजको मूल्य वृद्धिसँग सरोकार राख्छ ।
थाहा लागेअनुसार यसपटक मौसममा गडबडी भएर भारतमा उत्पादन हुँदै आएको प्याजमा भारी मात्रामा कटौती भयो, अर्थात् उत्पादन कम भयो । उत्पादन कम र माग ज्यादा भएपछि स्वतः मूल्य बढ्ने नै भयो । पर्याप्त उत्पादन हुँदा भारतमा १० रूपैयाँ र नेपालमा १६ देखि २० रूपैयाँसम्ममा एक किलो प्याज किनेर भान्छामा पु¥याइन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था बदलियो । भारतमा उत्पादन कम हुनेबित्तिकै भारतमै प्याजको मूल्य आकाशियो भने उसको उत्पादन उपभोग गर्ने देशहरुमा मूल्य नबढ्ने कुरै भएन । चितवन पोष्टका पाठकहरुका लागि यी शब्दहरु लेख्दै गर्दाको दिनमा नेपालमा २५० रूपैयाँमा प्याज खरिद–बिक्री भएको छ । यो मूल्य आजसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो र यति ठूलो रकम तिरेर प्याज खानु नेपाली नागरिकहरुको महाभूल हो भने नालायकीपनको नयाँ नमुना पनि हो ।
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाद्वारा बंगलादेशी जनताले प्याज नखाने घोषणा गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ, अर्थात् जनताको क्रयशक्तिभन्दा ज्यादा मूल्य भएपछि शेख हसिना वाजेदले प्याज आयात नै बन्द गर्नुको अर्थ सरकार देश र जनताप्रति ज्यादै सचेत र होसियार रहेछ भन्ने दह्रो प्रमाण हो । साँचो कुरा त यही हो, प्याज उत्पादन त बंलादेशले पनि गर्छ तर जनतालाई त्यहाँ उत्पादित प्याजले पुग्दैन । अपुग हुनाको परिणाम हो उसले भारतको भर पर्नु परेको छ । एकातिर सधैँभरि भारतको भर पर्दा वाक्किएको बंगलादेशले यसपटक मूल्य वृद्धिसँगै प्याज खानै बन्द गरेको छ । यो एउटा अनौठो समाचार पनि हो । प्याज नखाएर मान्छे मर्ने होइन, खाएर उत्पातको फाइदा हुने पनि होइन । निष्कर्ष के हो भने जाबो प्याज नभए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने सन्देश बंगलादेशले दिँदा नेपालले भने उपभोग कम गर्ने नीति लिएको बुझिएको छ ।
अब बंगलादेशले प्याजै खान्न भन्छ भने हामीलाई मात्रै प्याज खान किन पर्ने ? नुन किन्ने पैसा प्याज किन्न, तेल किन्ने पैसा प्याजै किन्न, जिरा, धनियाँ र बेसार किन्ने पैसा पनि नाथे नभए पनि काम चल्ने प्याजैमा किन खेर फाल्नु ? कम से कम यति त नेपाली जनताले अब बुझ्नुपर्छ कि अन्य आवश्यकताका वस्तु खरिद गर्न सकिने पैसाजति सबै एउटा प्याजमै किन खन्याउनु ? नेपाली जनताले पनि अब प्याज नखाए हुन्छ । यदि नेपाली जनताले प्याज नखाने निर्णय गर्ने हो भने त्यो निर्णय भारतीय जनताका लागि न्याय हुन जान्छ । किन पनि न्याय हुन्छ भने नेपालीले प्याज खरिद नगर्नेबित्तिकै भारतमा प्याज सस्तो हुन जान्छ र त्यहाँका करोडौँ गरिब जनताको भान्छामा प्याज छिर्न सक्छ । फेरि भारतीय प्याज जिन्दगीभरि भनौँ वा बाँचुञ्जेल नखाने भन्ने अर्थ पनि होइन, जब अर्को वर्ष मौसम ठीक हुन्छ, ठीक समयमा पानी पर्छ तब प्याज उत्पादन छेलोखेलो हुन्छ, तब फेरि भारतबाट प्याज नेपाल आइपुग्छ, त्यतिबेला प्याज खाए पनि भइहाल्छ । प्याज उत्पादन ज्यादा हुने र सस्तिने अवस्थासम्म कुर्न नमिल्ने पनि होइन ।
अब अहिले प्याजको हाहाकार भयो । अहिले त एउटा गतिलो प्याजको डल्लोको फोटो हेर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्लाजस्तो अवस्था देखिएको छ । यसो हुनुको कारण अरु होइन, हो त के भने मान्छेको जे छैन वा थोरै छ त्यसको उपभोगको लागि मरिहत्ते गर्ने स्वभाव नै कारण हो । भए ठीक छ नभए पनि ठीक छ भन्ने तरिकाले “सन्तोषम् परम् सुखम्” को मन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने हो भने भारतमा प्याज उत्पादन कम भयो त हामीलाई किन ज्वरो आउनुप¥यो ? भारतमा प्याज उत्पादन कम हुँदाको पहिलो समस्या त भारतलाई नै हो । उत्पादन कम हुँदा छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गर्न नसक्नु, देशकै जनताको मागअनुसार प्याज आपूर्ति गर्न नसक्नु र मूल्य बढ्दा भारतीय जनतालाई मर्का पर्नुको नकारात्मक असर त पहिले भारतलाई नै पर्ने हो । नेपाललाई त खासै भन्ने हो भने आर्थिक कोणबाट व्याख्या गर्दा फाइदै हुन्छ । अब यो अवस्थाबाट सिकेर नेपालले आजैदेखि उत्पादन हुने क्षेत्र खोजेर बरू प्याज उत्पादनमा पुँजी, बुद्धि, श्रम र धन लगाउन सुरू गर्नुपर्छ ।
छानबिन गर्नै पर्दैन, नेपालमा प्याज उत्पादनका लागि हजारौँ हेक्टर उपयुक्त जमिन उपलब्ध छ । उत्पादन कसरी गर्ने सिकाउनका लागि देशभित्रै कृषि विज्ञहरुको समूह छ । बुद्धि र तरिका पु¥याउने हो भने पानीको व्यवस्थापन सजिलैसँग गर्न सकिन्छ । यसै त जग्गा मलिलो छँदैछ, आवश्यक मलको प्रबन्ध गर्न पनि कठिन छैन । प्राकृतिक मल भनौँ वा कम्पोष्ट मल प्रयोगमार्फत पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । युरिया मल प्रयोग नगर्दा पनि अर्गानिक प्याज उत्पादन हुन सक्छ । दुनियाँमा असम्भव केही छैन ।
नेपालले भारतबाट निकै लामो समयदेखि प्याज आयात गरिरहेको छ । नेपाली जिब्रोमा भारतीय प्याजको स्वाद लामो समयदेखि टाँसिएको छ । अब त्यो भारतीय प्याजको स्वादको सट्टा नेपाली जिब्रोमा नेपाली प्याजको स्वादले स्थान लिनसक्छ । त्यो अवस्था अब नेपाली जनताले सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । जिन्दगीमा मौका सधैँभरि आउँदैन । भारतमा प्याज उत्पादन कम हुनु नेपालका लागि एउटा सुनौलो मौका हुन सक्छ । के मानेमा मौका हुन सक्छ भने यही बखत हामीले प्याज उत्पादन सुरू गरेर परनिर्भरता अन्त्य गर्न सकिन्छ, अर्थात् भारतकै प्याजको भरमा बाँचिरहेको नेपाली भान्छाले नयाँ अनुभव हासिल गर्न सक्छ भने अर्कोतिर भारतमा यस्तै अवस्था रहिरहे हामीले भारतीयहरुलाई नेपालमा उत्पादित प्याजको स्वाद दिन सक्छौँ । यो काम असम्भव छैन मात्रै होइन, कठिन पनि छैन । अब केवल चाहना र लगनशीलताको खाँचोमात्रै छ । अमेरिकाले संसारमा सबैभन्दा ज्यादा मकै र भटमास उत्पादन गर्दै आइरहेकोमा हिजोआज चीनले सोही हाराहारीमा मकै र भटमास उत्पादन गरेर विश्वलाई चकित तुल्याएको छ ।
आजसम्म अमेरिकाले हवाईजहाज, कोकाकोला, कम्प्युटर र हतियार उत्पादनबाट विश्वको धन बटुलेको अवस्थामा चीनले पनि पछिल्ला दिनमा अमेरिकी उत्पादनको सिको गर्दै विश्वबजार कब्जा गर्ने दौडमा रहेको छ । चीनले हरेक प्रकारका उत्पादनलाई जोड दिएको छ । अमेरिकाले मकै, भटमास, कम्प्युटर, हवाईजहाज, हतियार र लोकप्रिय पेय पदार्थ कोकाकोला उत्पादन गर्न सक्दा नेपालले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न सोध्न नमिल्ने होइन । तर, प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले गरेजस्तै उत्पादन हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने दिनसक्ने अवस्थामा आजको नेपाल छैन । हो, अमेरिकाले गरेजस्तो उत्पादन गर्न आजकै मितिमा हामी सक्षम छैनौँ, तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी जाबो प्याज पनि उत्पादन गर्न सक्दैनौँ ।
जिन्दगीभरि नेपाल भारतको प्याजमा भर प¥यो अब भर पर्न हुन्न । नेपाली निरीह आँखाहरुले भारतको सिमानाबाट ट्रकका ट्रक आलु, प्याज, काउली, बन्दा, गोलभेँडा, धनियाँलगायतका तरकारीहरु नेपाल भित्रिएको हेर्दै आएका छन् । नेपाली मनको चाहना आइन्दा ती तरकारी लादिएका ट्रकहरु नेपाल आएको हेर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने नै हो । तर पनि हामी नेपाली जनताको ठूलो हिस्सालाई आजसम्म विदेशमा गएर अरुको गुलामी गर्न ठीक भन्ने ‘अन्यायी विचार’ पढाइएको हुँदा हामी नेपाली जनताले नेपालमै स्वरोजगारसहितको उत्पादन प्रक्रियामा भाग लिन सकेका छैनौँ । हिजो अनेक खालका गल्ती र कमजोरीहरु भए, अब कम्तीमा उत्पादनको मामलामा नेपाली जनताले गल्ती गर्नुहुन्न । भारतमा प्याजको मूल्य बढोस् वा घटोस् त्यसतर्फ चिन्ता गर्नुको साटो अब स्वदेशमै प्याजलगायतका तरकारी र अन्न उत्पादन सुरू गर्नुपर्छ । खाद्य परनिर्भरताबाट मुलुकलाई मुक्ति दिनुपर्छ । आउने दिनमा नेपाल कम्तीमा प्याज नामको तरकारीमा आत्मानिर्भर होस्, ज्यादामा नेपाली प्याज भारतीयहरुको भान्छामा नयाँ स्वादका साथ छिरोस् । एक किलो २५० मा होइन, पाँचै रूपैयाँ किलोमा नेपालभित्रै पाइयोस् !